जीवन विकास लघुवित्तको आइपीओ बाँडफाँट कहिले ? « Arthabazar.com
प्रकाशित मिति : २१ असार २०७८, सोमबार १५:१४
काठमाडौं । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ शुक्रवारसम्म बाँडफाँट हुने भएको छ । जीवन विकास लघुवित्तले सर्वसाधारणको लागि निष्काशन गरेको प्राथमिक शेयर (आइपीओ) यस साताभित्रै बाँडफाँड गर्ने गरि तयारी थालेको हो ।
विक्री प्रबन्धक एनएमिबि क्यापिटलले अन्तिम बाँडफाँट शुक्रवारसम्म गरिसक्ने गरी काम गरिरहेको बताएको छ ।
हाल कम्पनीको संस्थापक तर्फबाट मात्र चुक्ताभएको पूँजी रू. ४१ करोड ६ लाख ७० हजार रहेको छ । आईपीओ पश्चात यो पूँजी रू. ६० करोड ८४ लाख पुग्नेछ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्ममा कम्पनीको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ३०५ दशमलव २७ रहेको छ भने प्रतिशेयर आम्दानी रू. १०४ दशमलव ९७ रहेको छ ।